Alshabaab Oo Soo Bandhigay Gaadiid Ay Sheegeen Iney Ku Qabsadeen Dagaalkii Mahadaay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho, Mareeg.com: Alshabaab ayaa manta degmada Buulo Barde ee gobolka Hiiraan kusoo bandhigay gawaari ay sheegeen iney ku qabsadeen dagaal ay xalay ku qaadeen degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo deegaanka Buurane oo ku dhow degmadaas.
Alshabaab ayaa sidoo kale soo bandhigay sawirro muujinaya sida ay ugu diyaar garoobeen dagaalkii ay xalay ku qaadeen Mahadaay, waxeyna sheegeen in halkaas ka qaateen marka laga soo tago gaadiidka raashin iyo rasaas.
Afhayeenka ciidanka Alshabaab Sheekh C/Caziiz Abuu Muscab ayaa sheegay in ciidankoodu ay xalay lawareegeen Mahadaay ayna baaritaanno ku sameeyeen xaafadaha degmada gaar ahaan saldhigyo iyo guryo ay deganaayeen ciidanka DF-ka iyo saraakiishooda.
Wuxuu sheegay in dagaalkii xalay ay ciidanka Alshabaab ku qabsadeen 2 gaadiidka dagaalka ah ayna qaateen hub iyo rasaas ku keydsanaa gudaha Mahadaay.
“Mujaahidiintu xalay iyagoo hub culus wata ay weerar ku qaadeen degmada Mahadaay iyo deegaanka Buurane, Allaah fadiligiis ciidanka mujaahidiinta si buuxda ayay degmada ula wareegeen waxayna cadawga kasoo qaniimeysteen 2 gaari halka sedax kale ay gubeen”ayuu yiri Abuu Muscab.
Wuxuu sheegay in dhimashada ciidamada dowladda Federaalka kasoo gaartay weerarkaas gaareyso 10 askari oo uu sheegay in lagu kala dilay dagaaladii Buurane iyo Mahadaay.
Dagaalkii xalay ka dhacay Mahadaay ayaa la sheegay iney ku dhinteen ilaa 10 ruux oo u badnaa ciidamada dowladda Soomaaliya oo Alshabaab weerar gaadmo ah ku qaadeen.